I-Luthuli Museum igubhe olweze mvelo | News24
I-Luthuli Museum igubhe olweze mvelo
Abafundi base-Radha Roopsingh becosha udoti kuNokukhanya Luthuli Street eGroutville, ngeledlule.Isithombe: Sithunyelwe
I-LUTHULI Museum igubhe i-World Environment Day, ngokuhlanganisa amalungu omphakathi nezikole ukuzocosha udoti emgwaqeni uNokukhanya Luthuli, eGroutville ngeledlule.
Umphakathi nabafundi baqale bafundiswa ngomlando walolu suku nokubaluleka kokugcina indawo abahlala kuyo ihlanzekile
Okhulumela i-Luthuli Museum, uNksz Zinhle Nyembe, uthe: “Umgubho walolu suku waqalwa ngo-1972. Lolu suku lubalulekile njengoba luqwashisa abantu ngemvelo kanti futhi lugqugquzela ukuba begcine imvelo ihlanzekile,” kusho yena.
Uqhube wathi i-Luthuli Museum igubha lolu suku namalungu omphakathi nabafundi, inhloso bekuwu kuthi ihlanganise abantu abehlukahlukene, ibafundise ngokubaluleka kwemvelo nokugcina izindawo zomphakathi zihlanzekile.
Emva kwezinkulumo, abafundi base-Lloyd Primary, Radha Roopsingh, Mavivane Primary, abasebenzi base-Luthuli Museum namalungu omphakathi bakiline umgwaqo uNokukhanya Luthuli, behlome ngamasaka bacosha udoti bashiya indawo yase-Groutville ihlanzekile.
UNKSZ Nyembe uthe lolu suku lube yimpumelelo njengoba abe-Luthuli Museum bakhe ubudlelwane nezikole namalungu omphakathi, kanti okubaluleke kakhulu ukuthi bakwazile ukucosha udoti